सवैला प्रहरीको थुनुवा कक्षमै झुन्डिएर मृत अवस्थामा भेटिए युवा, सवैलामै गोली हानी अर्को युवकको हत्या(तस्वीर)
जनकपुरधाम, जेठ २८ : धनुषामा गएराती शंकाष्पद मृत्यु र हत्याको घटना गरि दुईजनाको ज्यान गएको छ । धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सवैलाको थुनुवा कक्षमै एकजना झुन्डिएर मृत्यु भएको अवस्थामा भेटिएका छन् ।
थुुनामा रहेका सवैला नगरपालिका वडा नं. १२ का २२ वर्षिय शभ्मु सदा मुसहर झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएको इप्रका सवैलाका प्रहरी निरिक्षक चन्द्रभुषण यादवले बताए । ‘सवारी ज्यान कसुर मुद्दामा थुनामा रहेका मुसहर गए राती २ बजे तिर थुनुवा कक्षको शौचालयमा झुन्डिएको मृत अवस्थामा हामीले पायौं, प्रहरी निरिक्षक यादवले भने ।
एता थुनामै मुसहरको मृत्यु भएपछि घटना शंकाष्पद रहेको भन्दै उनका गाँउलेहरु धनुषाको वडा नं. १२ बरकुर्वामा सडक अवरुद्व गरि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यहाँ पुगेको प्रहरीको भ्यानमा समेत उनीहरुले तोडफोट गर्न थालेपछि स्थिती नियन्त्रण्मा लिन प्रहरीले अश्रु ग्याँस समेत प्रहार गरेको छ । प्रहरी हिरासतमै मृत्यु हुनु शंकाष्पद रहेको भन्दै उनीहरु सत्य तथ्य छानविनको मांग गरिरहेका छन् । भीड र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि आश्रुग्यास फायर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्थानीयहरु प्रहरी चौकीमा बाहिरैबाटै ढुँगामुढा गरेपछि बाहिर राखिएको भ्यानमा क्षति पुगेको हो । तोडफोडवाट इलाका प्रहरी कार्यालय सवैला र यदुकोहाको भ्यानहरुमा समान्य क्षती पुगेको छ । एता घटनाको छानबिन भइरहेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ ।
सवैला–७ नवटोलीमा गोली हानी युवकको हत्या
धनुषामै गएराति एक जना युवकको गोली हानी हत्या समेत भएको छ । सवैला वडा नं. ७ नवटोली बस्ने जय किशोर मण्डलको छोरा २५ वर्षीय अरुण मण्डल घरमै रहेका वेला चिनजानकै मानिशले बोलाएर एक सय मिटर पर रहेको पोखरीको डिलमा पुगेपछि गोली हानी हत्या गरेको धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रामेश्वर कार्कीले बताएका छन् । यद्यपि मण्डललाई कस्ले बोलायो भन्ने बारेमा प्रहरीले खुलाउन चाहेनन ।
अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाका एक अधिकृतका अनुसार चिनजानकै व्यक्तिले बोलाएपछि उनी घरबाट निस्किएका थिए । त्यसैले व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण घटना भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । यद्यपि, आरोपित पक्राउ परेपछि मात्रै हत्याको कारणबारे खुल्नेछ । प्रहरीका अनुसार मण्डलको कन्चटमा गोली लागेको छ । प्रहरी परिचालन गरि घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी कार्कीले बताए ।